आज असार ९ गते बिहीबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात ! « Sansar News
आज असार ९ गते बिहीबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !
९ असार २०७९, बिहीबार ०६:५६
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ भने मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। दिउँसोदेखि साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। बेसुरमा काम गर्दा दुःख पाइनेछ। पुरानो गतिले पनि काम बिग्रन सक्छ।
२०७९ असार ९ गते, बिहीवार, (२३ जुन २०२२)
तपाईको आज बुधबारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त विशेष फाइदा ?